Global Voices teny Malagasy » Mpikatrok’i Hong Kong nodidiana higadra noho ny fiaraha-mahatsiaro tamin’ny taona 2020 ny famonoana tao an-kianjan’ny Tiananmen · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Mey 2021 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Na eo aza ny fandraràn'ny polisy, Hong Konger an'arivony maro no nivory tampoka tao amin'ny Zaridaina Victoria tamin'ny 4 Jona 2020, ho fahatsiarovana ny fandripahana tao amin'ny Kianja Tiananmen. Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alàlana.
Tamin'ny 6 May, mpikatroka mpomba ny demaokrasia efatra tany Hong Kong no nahazo sazy an-tranomaizina noho ny fandraisany anjara tamin'ny Fiaren-tory ao amin'ny Kianjan'i Tiananmen fanao isa-taona ny 4 jona tamin'ny herintaona.
Nampian’ ilay mpitsara ao amin'ny distrika, Stanley Chan, sazy 10 volana an-tranomaizina ny sazin'i Joshua Wong, mpikatroka malaza mpomba ny demaokrasia, izay efa migadra ankehitriny mandritra ny 13,5 volana taorian'ny niampangana azy tamin'ny fikarakarana sy fitarihana fivoriambe tsy nahazoana alalana tamin'ny taona 2019.
Mpanolotsain'ny distrika ireo telo hafa nahazo sazy: Lester Shum voaheloka higadra enim-bolana, Tiffany Yuen sy Jannelle Leung kosa samy nahazo sazy an-tranomaizina efa-bolana. Ho very toerana ao amin'ny filankevitry ny distrika izy telo ireo, miatrika vesatra fanasaraham-bazana araka ny Lalànam-piarovam-pirenena ihany koa i Wong sy i Shum noho ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana savaranonandro prô-demaokrasia hidirana fifidianana Filan-kevitra Mpanao lalàna.
Nivory tao amin'ny Park Victoria tao afovoan-tanànan'i Hong Kong mba hahatsiaro ny Fandripahana tao Tiananmen tamin'ny 4 Jona ny HongKongers nanomboka ny taona 1990. Ny sazy napetraka tamin'ny 6 Mey lasa teo no fotoana voalohany nanamelohana am-ponja an'io asa fahatsiarovana milamina io.
Tamin'ny herintaona, tsy nety namoaka fahazoan-dàlana hamory fivoriambe ho an'ny mpikarakara ny fiambenana ny polisy ao Hong Kong, noho ny olana areti-mandringana araka ny filazany. Vokatr'izany, izay nanatrika ny fiambenana dia natahorana ho voampanga ho nandray anjara tamin'ny fivoriambe tsy nahazoana alalana.
Amin'ireo Hongkonger 20 000 mahery nandrehitra labozia tao amin'ny Victoria Park, dia nanavaka mpikatroka 26  hosamborina sy hotsaraina ny polisy. Ny roa tamin'ireo mpikatroka, Nathan Law sy Sunny Cheung, no nandao an'i Hong Kong nanao sesitany ny tenany tany ivelany.
Hoy  ny mpitsara tamin'ny didim-pitsarana:
Raha mbola mitohy ny korontana amin'ny taona 2019, ny fanangonana mpandray anjara 20 000 amin'ny alina manokana toy ny 4 jona dia nidika fa mety hitombo ny fientanam-po, ary ny singa tsy voafehy dia afaka manararaotra ny toe-javatra ary mandrisika herisetra.
Benedict Rogers, lehiben'ny Hong Kong Watch ekipa mpiaro ny zon'olombelona monina any Londres, naneho hevitra  momba ilay fe-potoana am-ponja mihoa-pampana:
Ny fampidirana am-ponja an'i Joshua Wong, Lester Shum, sy ireo mpanolotsaina distrika roa noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fandrehetana labozia am-pilaminana manamarika ny Fandripahana tao amin'ny kianjan'i Tiananmen dia fiondrehana vaovao amin'ny fandravàna ny fahalalahan'ny tanàna. Toa heloka bevava izao any Hong Kong ny mahatadidy ny famonoana olona tamin'ny 1989, izay namonoan'ny Antoko Komonista Sinoa ireo mpianatra mpikatroka an'arivony.
Mpikatroka 20 hafa no miatrika fiampangana amin'ny fandaminana sy fandraisana anjara amin'ny fiareta-tory 4 Jona. Ny iray amin'izy ireo, izay talen'ny Firaisankina Hong Kong ho fanohanana ny hetsika demaokratika tia tanindrazana ao Shina (HK Alliance), mpikarakara ny fiareta-tory, dia miatrika fiampangana telo ao anatin'izany ny fandaminana, ny fandrisihana ary ny fandraisana anjara amin'ny fivoriambe tsy nahazoana alàlana.
Amin'ity taona ity, voarara tanteraka  ny fiareta-tory amin'ny 4 Jona ao Victoria Park, satria nampiato ny fampanofana toerana sy fotodrafitrasa ny Sampan-draharahan'ny Serasera sy ny Kolontsaina, noho ny olana ara-pahasalamana.
Raha mbola mety handeha ho ao Victoria Park ny HongKongers amin'ny 4 Jona toy ny tamin'ny herintaona, dia nanambara ny didim-pitsarana fa mety hiteraka fisamborana sy fanagadrana izany. Araka ny nanamarihan'i @limlouisa:
Aza manao hadisoana: efa heloka bevava amin'ny alàlan'ny fiarovana amin'ny covid ny fahatsiarovan'ny besinimaro ny 4 jona ao hk
Na eo aza ny fandrahonana dia nanohy ny hetsika fahatsiarovana 4 jona isa-taona ny HK Alliance. Tamin'ny 2 Mey, ny sefon'ny lefitry ny HK Alliance, Albert Ho sy Chow Hang-tung — izay miatrika fiampangana roa ihany koa noho ny fandrisihana sy ny fandraisana anjara tamin'ny fiareta-tory tamin'ny herintaona— no nitarika ny fombafomba fahatsiarovana isan-taona teo anoloan'ny Andrin'ny Henatra  ao amin'ny Oniversite Hong Kong. Xinqi Su, mpanao gazety ao Hong Kong, no nandrakitra ny hetsika:
“Na dia tian'ny fitondrana aza ny hamadika ny fandrehetanjiro (ho fahatsiarovana ny 4 jona), dia hikiry hatrany izahay,” hoy ny mpitarika ny HK Alliance Chow Hang-tung. “Manantena koa izahay fa afaka mahatadidy ny andro ny tsirairay, mahatadidy ny famonoana.” pic.twitter.com/cL1mbFVOyS
Taorian'ny didim-pitsarana, nanoritra  i Chow:
Ho avy indray ny 4 Jona – 31 taona izahay nandrehitra labozia tao amin'ny Victoria Park ary mbola hanohy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/14/152584/
 nanavaka mpikatroka 26: https://www.hkcnews.com/article/33888/%E5%85%AD%E5%9B%9B31%E5%91%A8%E5%B9%B4-%E5%85%AD%E5%9B%9B%E7%87%AD%E5%85%89%E6%99%9A%E6%9C%83-%E5%85%AD%E5%9B%9B%E7%85%BD%E6%83%91%E6%A1%88-33888/%E3%80%90%E5%85%AD%E5%9B%9B%E9%9B%86%E6%9C%83%E6%A1%88%E3%80%9126%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E6%8E%A7%E7%85%BD%E6%83%91%E5%8F%8A%E5%8F%83%E8%88%87%E9%9D%9E%E6%B3%95%E9%9B%86%E7%B5%90%E7%AD%89%E7%BD%AA-%E6%8E%A7%E6%96%B9%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%8D%E5%87%86%E8%A2%AB%E5%91%8A%E9%9B%A2%E6%B8%AF%E6%B3%95%E5%BA%AD%E6%8B%92%E6%89%B9
 naneho hevitra: https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2021/5/6/todays-sentencing-of-pro-democracy-activists-is-a-monstrous-abuse-of-the-legal-system
 voarara tanteraka: https://hongkongfp.com/2021/04/28/hong-kong-bans-victoria-parks-tiananmen-massacre-vigil-again-citing-covid-19-restrictions/
 Andrin'ny Henatra: https://en.wikipedia.org/wiki/Pillar_of_Shame